Tetik'asa tsara indrindra amin'ny 26 Elephant Tattoos ho an'ny lehilahy sy vehivavy - tetikasam-pankasitrahana
Tetik'asa tsara indrindra amin'ny 26 Elefanta ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy
sonitattoo Jolay 7, 2016
Ny lazan'ny biby ampiasaina amin'ny tatoazy dia nitombo nandritra ny taona maro. Asehon'izy ireo ny toetra mampiavaka ny olona rehefa manana biby fiompy na tia ny biby toy ny elefanta, liona ary maro hafa. Ny sasany amin'ireo tatoazy tena tiany indrindra amin'ny biby dia avy amin'ny bibidia any anaty ala.
Ny dikan'ny #elefanta tatoazy dia manana dikany isan-karazany amin'ny olona samihafa. Ny Elefanta dia midika hoe fiadanana, hery ary hery. Izany dia tandindon'ireo izay mitady fifandraisana, fahendrena, vintana tsara ary fahombiazana. Ny olona sasany dia mihevitra azy io ho fahavokarana ary ny hafa dia toy ny fanoloran-tena, fiheverana, faharetana ary fahadiovam-pitondrantena.
Ny Elefanta dia heverina ihany koa miaraka amin'ny rahona sy ny firoboroboana, ny adidy, ny fahasambarana, ny fahatsiarovana, ny fahavononana ary ny tsy hita. Ireo takelaka elefanta dia tonga amin'ny endriny samihafa. Na dia izany aza, ny asan'ny mpandraharaha iray dia manapa-kevitra hoe aiza no hametrahana ny #tattoo. Ny olona rehetra tia an'ity tatoazy ity dia manavaka ny dikany ary afaka milaza aminao fotsiny hoe aiza izy ireo no mampiasa ny tatoazy amin'ny toerana izay nosoratan'izy ireo. Ny elefanta dia maneho ny Prosperity, Memory, ?? Happiness, ?? Ambony, ?? Famaritana, tsy misy dikany ary fangorahana.
1. Mahagaga tanana Elefanta tato ho an'ny ankizilahy
Ny olona dia mampiasa tatoazy hanehoana ny toetrany sy ny fihetseham-pony. Ny tatoazy dia nanjary nipoitra teo amin'ny vahoaka ny olona.
2. Bicep Elephant tato ho an'ny lehilahy
Misy ireo olona izay tsy afaka mijanona ny fisintonana isaky ny mahita antony iray amin'izany. Inona no ataonao rehefa mahaliana an'ity #design mahagaga ity izay mahatonga anao hanodina ny lohany toy ity tatoazy ity?
3. Kitapom-bolo tsara tarehy ho an'ny zazavavy
4. Leaves and elephants Tattoo ink tato ho an'ny vehivavy rojo
5. Ny elefanta tia Loko tato anaty biceps vavy
Misy ny mpanamboatra manokana ny tatoazy isan-karazany. Ny zavatra tsara azonao atao ho an'ny tenanao dia ny mahazo mpanakanto iray izay miompana amin'ny tatoazy.
6. Rose sy Elephant tattoo idea ho an'ny vehivavy
Nandritra ny taona maro dia nanomboka nanao tatoazy ny olona. Aza mandeha mpanakanto mahay. Angamba zavatra mahatsiravina atao izany satria mety hahazo tatoazy izay tsy ho tsara toy izany ianao.
7. Tattoo elephant tattoo ho an'ny vehivavy
8. Tetezam-boninahitra voninkazo sy elefanta eo amin'ny soroky vavy
Ny fandaharana dia vita tanteraka ary tsy hahazo zavatra hafa ianao raha mifandray amin'ny mpanakanto mahay hanampy anao.
9. manodidina ary volavolan-doko miloko volomparasy ho an'ny vehivavy miverina
Ny asan'ny mpanakanto iray dia mety handresy lahatra anao fa tsara ny manao tattoos.
10. Voninkazo tsara tarehy sy elefanta ho an'ny vehivavy
Tsy misy fomba ahafahanao mahazo tatoazy maharitra izay hankahalainao. Tsara indrindra ny mamolavola ny sainao voalohany amin'ny drafitra ilainao alohan'ny hanaovana izany.
11. Compass sy elefant biceps tattoo ho an'ny zazavavy
12. Cool elephant tatoazy eo amin'ny leg
13. Elefant tato-tato-toto ho an'ny vehivavy
14. Afobe elefanta tatoazy eo amin'ny tanana
Ny biby matanjaka toy ny elefanta dia manaja ny olona avy any Afrika sy India noho ny tanjaka maneho azy sy ny habeny. Mpitarika goavana no nifandray tamin'ireo elefanta ireo ary nandritra ny ady, elefanta dia lasa fitaovam-piadiana ara-psikôlôgy izay mampitahotra ny rehetra manoloana ny toby fahavalo alohan'ny hanombohan'ny ady.
15. Tetezam-boninkazo sy elefanta mitovitovy amin'ny lolo vavy
Ao India, dia mivavaka izy ireo ary maneho hatsaram-panahy sy maha-Andriamanitra. Raha ny tatoazy elefanta, ny lokon'ny elefanta dia mifanandrify tsy toy ny biby sasany izay ampiasaina ny loko samihafa. Ny fampiasana an'io tatoazy io dia mety hampiseho fahatokiana sy maharitra. Fantatrao izao hoe nahoana ny ankamaroan'ny olona no manao an'io tatoazy io.
16. Zavakanto mena sy elefanta amin'ny tanana vavy
Ny fahamarinana dia ny tatoazy elefanta dia tsy nanjary nalaza tahaka ny biby hafa. Manontany tena ve ianao raha misy vehivavy afaka mampiasa an'io tatoazy io? Eny! Ireo lehilahy dia mety ho mpampiasa malaza amin'ny tatoazy elefanta fa ireo vehivavy kosa dia mbola manohy izany.
17. Super feno Elephant tattoo idea ho an'ny lehilahy
Raha tsara ny mpanakanto dia afaka manongotra ny elefanta tsotra fotsiny izy mba hiditra ao anatin'ny vatana, anisan'izany ny rantsantanana na kitrokely.
18. Elefanta tsotra tatoazy amin'ny tovolahy
Tokony ho takatrao fa ny olona sasany izay manao an'ity tatoazy ity, manao izany noho ny fifandraisany amin'ny ara-panahy, ara-lojika na ny an'ny tenany manokana, fa tsy manadino fa ny sasany dia mandeha ho an'ity tatoazy ity noho ny lanjany ho an'ny aesthetic.
19. Tapa-tavy tsara tarehy elefanta eo amin'ny vehivavy
Tokony ho azonao antoka fa ny tatoazy elefanta izay ampiasainao dia izay tena ilainao satria ny ankamaroan'ny tatoazy dia maharitra.
20. Lehilahy mahatalanjona tato ho an'ny tatoazy ho an'ny soroka
Mety mila manao fikarohana ianao eo amin'ny tatoazy alohan'ny fiheveranao ny fampiasana izany. Misy fomba maro hanosehana ny tatoazy elefanta ho mahazendana. Ilaina ihany ny fotoana sy ny tanan'ny mpanakanto manana talenta izay mahafantatra ny toerana hakana ny tatoazy.
21. Tapa-pandehanana elefanta kely mamorona hevitra ho an'ireo vehivavy miverina
Maro ireo tranonkala izay azonao ampiasaina rehefa mieritreritra ny manana tato elefanta ianao.
22. Zavamaniry sy elefant tatoazy ho an'ny lehilahy soroka
Rehefa mitsidika ireny tranonkala ireny ianao, dia ho mora kokoa ny mifidy izay tadiavinao. Ny hatsaran'ilay elefanta maneho dia afaka maneho tanteraka amin'ny tatoazy tsara.
23. Tatoazy mahatalanjona elefanta ho an'ny lehilahy tratra
Inona no mbola andrasanao hanova ny fomba fijerinao amin'ny tato elefanta?
24. Tola tsara tarehy elefant tato an-tsoratra momba ny zazavavy kely
Ataovy miaraka amin'ny tatoazy ny tatoahanao ary mitsiky rehefa mijery azy ny olona.
25. Tetikasa mavokely mena sy elefanta elefanta ho an'ny tanana
26. elefanta Tattoo design tattoo ho an'ny vehivavy
Tsindrio eto raha te hanangana Elefant Tattoo Designs
tattoos ho an'ny lehilahyfitiavana tatoazycat tattoostattoos rahavavyTatoazy ara-jeometrikamozika tatoazyhenna tattootattoo octopustattoo watercolorscorpion tattookoi fish tattootattoo infinitytattoos mpivadytatoazy fokoHeart Tattoosanjely tattoosarrow tattooloto voninkazomasoandro tatoazytattoos mahafatifatytato ho an'ny vatofantsikatattoos voronamehndi designlion tattoostattoo eyetratra tatoazytattoos backraozy tatoazytatoazy lolomoon tattoostattoos armAnkle Tattoostanana tatoazytattoos footcompass tattooTattoo FeatherNy zodiaka dia mampiseho tatoazyeagle tattoostatoazy ho an'ny zazavavytattoostattoo cherry blossomdiamondra tattootattoos crosstattoos sleeverip tattoostatoazy voninkazotattoo ideastattooselefanta tatoazynamana tattoos tsara indrindra